ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အစစ်အမှန်ပါပဲ။ Riedel ၏ STX-200 Professional Skype Interface သည်ပရိသတ်များအားရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သို့ဆက်သွယ်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒါဟာရီးရဲလ်ရဲ့ဒါကအချိန်! Riedel ရဲ့ STX-200 Professional က Skype ကို Interface ကိုမက်ဒရစ်မှ Connect ကိုပရိသတ်များကူညီပေး
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဧပြီလ 30, 2015 - ပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအသင်းမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိတ်သတ်တွေရောက်စေဖို့ created တစ်-of-a-မျိုး "ဒစ်ဂျစ်တယ်စတစ်ကာ" ပဏာမစဉ်အတွင်း Microsoft က (R) နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အတွက်အသုံးပြုသော Riedel ဆက်သွယ်ရေး တစ်ဦးကို real-time Q & Real Madrid အသင်းပရိတ်သတ်တွေနှင့်ကစားသမားများအကြားတစ်ဦးက session ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် STX-200 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Skype ကို (R) အင်တာဖေ့စ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖအားဖြင့်လိုင်စင်ရ, အ STX-200 တိုက်ရိုက် on-လေကြောင်းထုတ်လုပ်မှုမှဝေးလံသောသင်တန်းသားများကိုကနေတိုက်ရိုက်လွှအကြောင်းအရာရောက်စေဖို့ Skype ကို leverages တဲ့ stand-alone, ထုတ်လွှင့်တန်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
"ကို 'ဝါသနာရှင်စတစ်ကာအယ်လ်ဘမ်' 'အဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းအဆိုပါတိုက်ရိုက်အမေးအဖြေ Real Madrid အသင်းပရိတ်သတ်တွေနှင့်ကစားသမားများအကြားတစ်ဦးက session တစ်ခုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖန်တီးရန် Skype ကို၏တန်ခိုးကို အသုံးပြု. တစ်စုံလင်သောသာဓကပါပဲ" ဟု Lars Höhmann, Skype နဲ့ MediorNet မှာထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကပြောပါတယ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ STX-200 ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ All-In-One-box ကိုဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်မှာသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတှကျတိုးမြှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမယ့် Plug-and-play ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့် interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါကြှနျုပျတို့သညျဤအံ့သြဖွယ်နည်းပညာများစွာကိုပိုပြီးထူးခြားတဲ့အသုံးပြုမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ "
ယင်းမှပံ့ပိုးထဲမှာ "ဝါသနာရှင်စတစ်ကာအယ်လ်ဘမ်" 118 နိုင်ငံများမှသင်တန်းသားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ - အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေဇင်ဘာဘွေမှ - ဓာတ်ပုံများ၏အလတ်စားမှတဆင့် Real Madrid အသင်းအဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှု shared ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်အတွင်းမှာပဲ, "စတစ်ကာများ" ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးပန်ကာရဲ့ဓါတ်ပုံကို, အမည်, တိုင်းပြည်နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ပန်ကာအဖြစ်အချိန်အရှည် featured ။
အကောင်းဆုံးကိုရုပ်ပုံများကိုတင်သွင်းပြီစစ်ကြောစီရင်အဆိုပါ 12 ပရိတ်သတ်တွေမက်ဒရစ်အတွက်စန်တီယာဂိုဘာနေဗျူးကွင်းမှာမတ်လ 12 အပေါ်ကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားအတွင်းအမေးအဖြေကစားသမားတွေနဲ့တစ်ဦးက session တစ်ခုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့မှအယ်လ်ဘမ်၏တင်ပြချက်အပြီးတွင် Sergio Ramos, ဘေးလ်, မာစဲလိုနှင့် Chicharito အပါအဝင်ကစားသမား Skype ကိုစကားပြောဆိုမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ Skype ကိုသြစတြေးလျ, တရုတ်, ကိုလံဘီယာ, မက္ကဆီကို, ပေါ်တူဂီ, စပိန်, United Kingdom, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဗင်နီဇွဲလားသူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများမှခေါ်ဆိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Microsoft က Skype ကို TX ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ထုပ်ပိုးခြင်း, Riedel STX-200 ယူနစ်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကမ်းလှမ်း HD-SDI နှင့်ခေါ်ဆို Skype ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပါဝငျသောကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ်အစုံနှင့်အတူဟန်ချက်ညီ XLR အသံငါ / Os ။
အဆိုပါ Real-time အမေးအဖြေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကွောငျးတစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှုများအတွက်, ခြောက်လ STX-200s မိမိတို့၏အတူတစ် WAN သို့ချိတ်ဆက်ခဲ့သည် HD ဗီဒီယိုကိုအကျိုးရလဒ်များ (အသံဖိုင် embedded), ထို့နောက် MediorNet signal ကို-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျောရိုးကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေ။ beltpacks နှင့်မြောက်မြားစွာ keypanels အပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေး, တစ်ဦးအဆိုတော်ဒစ်ဂျစ်တယ် matrix ကိုအတူ facilitated ခဲ့ကြသည်။
"ဒီမိတ်ဖက်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်ပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမိတ်ဖက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ် '' Madridistas 'သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုလိုက်နာနှင့်ကလပ်အဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမျှဝေထားတဲ့အတွက်အားကစား၏ဗဟိုမှာပရိသတ်တွေထားလမ်းကိုပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အလမ်းဖွင့်, "အော်လန်ဒို Ayala Microsoft ကကော်ပိုရိတ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တစ်ဦးကပြောသည် လွန်စွာလိုလားသော ဘောလုံးပရိတ်သတ်။ "နောက်ထပ်အရေးကြီးသောသူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုးချဲ့ဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေအတွက်ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူပရိတ်သတ်များသို့ချိတ်ဆက်နေသည်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် Riedel ဆက်သွယ်ရေး Skype ကို STX-200 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-04-30
ယခင်: KEO ရုပ်ရှင်နယူးအဖြစ်မှန်-အခြေပြုစီးရီးအတွက်အဝေးထိန်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်မြှင့်ရန် Forscene အသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: ကြံရာမီဒီယာရဲ့အီဗာ Michon "မှပယ်ဖျက်" တွင်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရဲ့အလှအပစူးစမ်း